Depositing နည်းလမ်းများ | ကဒ်, ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ် & နောက်ထပ်! | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့! Depositing နည်းလမ်းများ | ကဒ်, ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ် & နောက်ထပ်! | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့!
Minimum deposit: £10 အထိ £30 daily.
ဝက်ဘ်ဆိုက်: https://www.neteller.com available in multiple languages (Japanese, German, Danish, Spanish, French, Italian, Turkish, Swedish, Polish).
Deposit up to £/€/$250 သို့မဟုတ်2500 kr upon account registration and up to £/€/$2500 သို့မဟုတ် 25 000 kr upon confirmation of your bank account details.
Deposit Limit: Minimum £/€/$ 10 သို့မဟုတ် 100 kr, Maximum: £/€/$ 700 သို့မဟုတ်7000 kr
Deposit Limit: Minimum £/€/$ 20 သို့မဟုတ် 200 kr, Maximum: £/€/$ 700 သို့မဟုတ်7000 kr